Masoarabo: Henakisoa Halal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2007 15:32 GMT
Ny tena dikan’ny teny hoe masoarabo eto moa dia hoe “fomba fijery arabo”. Ny Silamo, tahaka ny Jodaisma dia mandrara ny mpikambana ao aminy tsy hihinana henakisoa. Saingy inona moa no hitranga raha misy tsahotsaho fa misy fanomezandalana ara-pivavahana na ‘Halal’ hita eny an-tsena? Ity misy adihevitra nataona mpamaham-bolongana sy mpandray anjara hafa avy any Bahrain hijerentsika azy.
Sary avy amin’i SubZero Blue
Naneho ny heviny momba io entana amidy io tamina mpamaky iray i Mark, izay mpamaham-bolongana Libaney mipetraka any Kuwait:
Yeah, tsy mino an’io aho.
20 ny isan’ny fanehoan-kevitra tsara nipoitra avy tao ary misy aza moa fanehoan-kevitra hafa iasan’i Mark izay miasa ato. Hoy ny mpamaky iray:
Strong oxymoron [Fifanoheranteny ampiraisina manintona be]
Subzero Blue, avy any Tonizia kosa nieritreritra hoe inona koa ny sakafo voamarika ho Halal rehefa nahare ity vokatra ity avy tamin’ny bolongan’i Mark.
“Mahaliana. Nisy Aostraliana nikaro-kevitra mba hamoronana henakisoa halal ho an’ny Silamo. Mahafinaritra e! indrindra fa ny henakisoa no faratampon’ny sakafo tsy halal eto ambonin’ny tany. Hoy angamba ianao any an’eritreritra any hoe inona avy ny fangaro maha-halal ny zavatra hafa…” Hoy ny nosoratany.
Tonga tany amin’ny Bahrain Online, fanaovana karajia amin’ny teny arabo avy any Bahrain ny resaka.
متوفر في الاسواق
لحم خنزير حلال
مذبوح بالشريعة الاسلامية !!!
“Hitanao eny an-tsena. Henakisoa Halal novonoina araka ny fomba (lalàna) Silamo (Shariah) ,” hoy ny filazana izay mipetaka eo amin’ny sary eo ambony.
Nisarakevitra teo anelanelan’ireo nino fa tena nisy tokoa ilay karazan’entana amidy sy ireo nihazakazaka nanazava ny antony ny mpamaky.
Nijabaka tao amin’ireto vondrona farany ireto i Free Writer:
يبين ان كلمة حلال موجودة على ملصق … يعني ممكن اذا عندي هالملصق ألصقه و اصور …
او انها مركبة بدليل أن كلمة حلال مغطية على الحجي المكتوب بالإنجليزي
في الحالتين اله ناشر الصورة فاضي
Mivandravandra be fa misy soratra Halal ny famantarana. Midika izany fa mety naka iny marika iny ilay olona dia nametaka azy teo amin’ny entana ary dia nakany sary na namboarina io. Mazava be satria mamehy izay voasoratra amin’ny teny anglisy ny teny hoe Halal. Na ahoana na ahoana dia tsy nahita zavatra hafa tsaratsara kokoa hapetaka ilay olona nametaka io sary io.
Nanaiky ny hevitry Free Writer i Araby ary nanampy hoe :
أعتقد انه مُجرد ملصق تم وضعه على المُنتَج …
و لا داعي لتكبير المسألة …
العملية مفبركة … و لا تدخل العقل أنه مجلس “إسلامي” يقوم بذلك …
خصوصاً انه أكل لحم الخنزير من الكبائر و ليس بأمر عادي
Mino aho fa famantarana mipetaka amin’ny fonon’ny entana amidy fotsiny io ka tsy dia tokony itarina be loatra ny adihevitra. Namboarina tsy nomen’ny filankevitra Islamika izay tsy hanaiky na oviana na oviana ny fihinanana azy satria anisan’ny fahotana lehibe tsy azo ekena velively.
Ho fampitahana dia mitaraina ny mpamaky iray hafa:
يتم تصدير هذه اللحوم الى بعض دول الخليج
ومن ضمنها البحرين
لا رقابة ولاهم يحزنون
الخمور واللحوم المحرمة تباع علناً في البحرين
Aondrana any amin’ny helodranon’i Arabia ny entana amidy sahala amin’itony, ary tafiditra amin’izany i Bahrain. Tsy misy fanavazavana. Efa amidy ao Bahrain aza moa izao ny toaka sy ny hena fady.
[ny mpandika teny moa dia efa nanana ohampitenenana mampihomehy nanao hoe “rien n’est sale que le cochon, rien n’est pur que le porc” fa dia lalaonteny fotsiny io e!]
3 herinandro izayTonizia
Fanaovam-beloma an'i Lina Ben Mhenni, bilaogera Toniziana sady mpiaro ny zon'olombelona
Vakio amin'ny teny 日本語, 繁體中文, 简体中文, English